Trance (2020) | MM Movie Store
ဒီဇာတျလမျးအကဉျြးနဲ့ပတျသကျပွီးပွောရရငျတော့..စိတျနောကျနတေဲ့ညီဖွဈသူ သတျသသှေားတဲ့နောကျမှာ Motivational Speaker ဗီဂြူးပရာဆပျတဈနောကျဇာတိမွို့ငယျလေးကနေ မှမျဘိုငျးကိုပွောငျးလာခဲ့ပါတယျ ….
သူမြားတကာတှကေိုသာ အောငျမွငျရေးရဲ့သော့ခကျြဆိုပွီး ဟောပွောနပေမေယျ့ တကယျတမျး သူ့ဘဝက သုညသာသာ စုတျပွတျနုံခြာလှနျးလှပါတယျ။သူ့ရဲ့ အိပျမကျက တဈနကေ့ရြငျ ခနျးမကယျြကွီးတဈခုမှာ လူတဈသောငျးကြျော သူဟောပွောတာတှကေိုလာနားထောငျဖို့ပါပဲ။
အဆကျအသှယျတဈခုနဲ့ ထရိုငျပတျလုပျငနျးစုမှာ အလုပျသှားလြှောကျရငျး သူ့ကိုသမာရိုးကမြဟုတျတဲ့အလုပျတဈခု ကမျးလှမျးခံခဲ့ရပါတယျ။ အဲဒါက ဘာအလုပျလဲဆိုတာရယျ သူ့ဘဝ ဘယျလိုတဈဆဈခြိုးပွောငျးလဲသှားမယျဆိုတာကိုတော့ ကိုယျကိုယျတိုငျ ကွညျ့ရှုခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး။
IMDB 7.3/10 တောငျရရှိထားပွီးတော့ လူတှရေဲ့ အားကိုးရာရှာတတျတဲ့သဘောထားတှေ ဝိသမလောဘသားတှရေဲ့ အမွတျထုတျမှုတှကေို ကှကျကှကျကှငျးကှငျး ရိုကျပွနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီဇာတ်လမ်းအကျဉ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့..စိတ်နောက်နေတဲ့ညီဖြစ်သူ သတ်သေသွားတဲ့နောက်မှာ Motivational Speaker ဗီဂျူးပရာဆပ်တစ်နောက်ဇာတိမြို့ငယ်လေးကနေ မွမ်ဘိုင်းကိုပြောင်းလာခဲ့ပါတယ် ….
သူများတကာတွေကိုသာ အောင်မြင်ရေးရဲ့သော့ချက်ဆိုပြီး ဟောပြောနေပေမယ့် တကယ်တမ်း သူ့ဘဝက သုညသာသာ စုတ်ပြတ်နုံချာလွန်းလှပါတယ်။သူ့ရဲ့ အိပ်မက်က တစ်နေ့ကျရင် ခန်းမကျယ်ကြီးတစ်ခုမှာ လူတစ်သောင်းကျော် သူဟောပြောတာတွေကိုလာနားထောင်ဖို့ပါပဲ။
အဆက်အသွယ်တစ်ခုနဲ့ ထရိုင်ပတ်လုပ်ငန်းစုမှာ အလုပ်သွားလျှောက်ရင်း သူ့ကိုသမာရိုးကျမဟုတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခု ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါက ဘာအလုပ်လဲဆိုတာရယ် သူ့ဘဝ ဘယ်လိုတစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး။
IMDB 7.3/10 တောင်ရရှိထားပြီးတော့ လူတွေရဲ့ အားကိုးရာရှာတတ်တဲ့သဘောထားတွေ ဝိသမလောဘသားတွေရဲ့ အမြတ်ထုတ်မှုတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရိုက်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။